Somali News 10.20.21
Published October 21, 2021 at 8:33 AM CDT
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa ku dartay 100 dhimasho oo dheeri ah COVID-19 taas oo wadarta guud ka dhigaysa 6,848 tan iyo bilowgii masiibada.
Dhimashadu waxay dhacday ku dhawaad ​​laba bilood oo ka bilaabmaysay badhtamihii Agoosto.
Heerka togan ee gobolka ayaa hoos ugu dhacay 8.3%. Toddobaadkii hore waxay ahayd 9%. Heerka togan ee guud ahaan Siouxland ayaa hoos u dhacay iyada oo Degmada Woodbury ay tahay 13%.
Labada isbitaal ee Sioux City ayaa siidaayay tirooyinka toddobaadlaha ah ee muujinaya kororka bukaannada la daweynayo ee laga helay fayraska.
Iowan-ka shaqo la'aanta ah waxaa looga baahan doonaa inay toddobaad walba la kulmaan maareeyayaasha kiisaska gobolka, inay sameeyaan labanlaab baaritaan shaqo toddobaadle ah oo ay maraan xisaabaadyo si ay u caddeeyaan inay si firfircoon u raadinayaan shaqo hoos yimaada soo jeedin cusub oo uu ku dhawaaqay Gov. Kim Reynolds.
Afhayeenka Horumarinta Shaqaalaha Iowa ayaa sheegay in lacagaha shaqo la'aanta la xayiri karo haddii shaqaalaha shaqo la'aanta ah ay ku guuldareystaan ​​inay buuxiyaan shuruudaha cusub.
Hantidhawrka gobolku wuxuu ogaaday in nidaamka Medicaid ee gaarka loo leeyahay ee Iowa uu si sharci darro ah u diiday adeegyada ama daryeelka barnaamijka qaatayaasha, iyo labada shirkadood ee caymiska gaarka ah ee maamula nidaamka ay ku xad-gudbeen shuruudaha qandaraasyada ay la galeen dawladda. Agaasimaha barnaamijka ayaa diiday gabagabada warbixinta.
Xildhibaanka Jamhuuriga ee Iowa Randy Feenstra ayaa u tartamaya dib u doorashada degmada afraad ee gobolka ee daboolaysa Siouxland.
Feenstra, oo ka socota Hull, ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay doorashada 2020 ka dib markii ay garaacday Dimuqraadiga J.D. Scholten. Doorashadii hordhaca ahayd waxa uu helay 10% codad ka badan intii uu ku jiray wakiil Steve King. King ayaa laga saaray guddiyadii loo xilsaaray faallooyinka cunsuriyadda awgeed.
Somali News 10.15.21
Ururka xuquuqda naafada ee maxalliga ah wuxuu eegayaa inuu tallaabo sharci ah ka qaado Dugsiyada Beesha Sioux haddii aan wax laga beddelin akadeemiyadda…